Xil.fiqi oo yidhi Shan arrimood oo maangal ah oo aan Farmaajo loogu ogolaan karin In uu booqdo Hargaysa: – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xil.fiqi oo yidhi Shan arrimood oo maangal ah oo aan Farmaajo...
Xil.fiqi oo yidhi Shan arrimood oo maangal ah oo aan Farmaajo loogu ogolaan karin In uu booqdo Hargaysa:
Shan arrimood oo maangal ah oo aan Farmaajo loogu ogolaan karin In uu booqdo Hargaysa:
Guddiyadii wadahadalka labada dhinac oo hawlgab ahaa intii Farmaajo uu madaxweynaha ahaa, mudadaasna uusan muujin niydsami iyo shaqo socota oo uu ku mutaysan karo tagista halkaas.
Inuusan jirin ajande cad oo ay soo bandhigeen labada dhinac oo safarkaan lagu soo xaqiijinayo, ayadoo Somaliland dhankeedana ay ka muuqato In lagu dirqinayo ayagoon raalli ka ahayn, Farmaajana uu doonayo meel aan laga rabin in uu isku maqiiqo.
Fashilka isku haynta maamulkiisa iyo dawlad goboleedyada ka dhisan koofurta Soomaaliya iyo aaminsanaantiisa In xoog iyo ismaquunin lagu kala baxo sida waxa ka taagan Galmudug iyo Jubaland. Habdhaqankaan oo ahaa kii Somaliland gaarsiiyey meesha ay taagan tahay.!
Inuu ku jiro Md. Farmaajo bilihisii u dambeeyey asagoo waajahaya waxqabad xumo, kana dhiganaya booqashadan buunbuunin uu u adeegsado ololihiisa doorashada.
Cidda soo hindistaya sida gaarka ahna uga faa’idaysa safarkan waa Abiy Ahmed oo doonaya dekedda Zaylac in ciidamada badda Ethiopia ay saldhig u noqoto.